Waa Kulan Adag Waxa Uu Anaga Nooga Dhigan Yahay Final – Neymar JR Oo Ka Hadlay Kulanka Guul Ama Geerida Ah Ee Ay Stadio San Paolo Kula Yeelanayaan Napoli. – GOOL24.NET
Garabka kooxda Paris Sain-Germain ee Neymar JR ayaa noqday shaqsigii ugu dambeeyay ee ka hadla kulanka muhiimka ah ee ay la yeelan doonaan kooxda Napoli toddobaadkan ee qaybta ka ah tartanka UEFA Champions League.
Kooxda tababare Thomas Tuchel ayaa ilaa haatan rekoodh cajiib ah oo 100% ka haysata kulamada horyaalkeeda Ligue 1 balse waxa ay ku dhiban yihiin inay qaab ciyaareedka horyaalka u wareejiyaan tartanka ugu xiisaha badan Yurub.
Neymar oo farriin soo dhigay barta uu ku leeyahay Youtube ayaa sheegay inuu kulankani sida Final amaba kama dambays ugu yahay kooxdiisa isla markaana ay tahay inay u dheelaan sida kulankii ugu dambeeyay noloshooda.
26 jirkan ayaa yidhi “Waa kulan aad u adag, Waxa uu anaga noo noqon doonaa Final, Waa inaynu ogaano inay tahay inaan guul gaadhno kulankan”
“Waxaan rajaynaynaa inaan qaadano kulan wanaagsan si aan u helno natiijo fiican, Mar labaad waa inaan u ciyaarnaa sidii oo ay tahay kulankii ugu dambeeyay ee nolosheena” Ayuu hadalkiisa kusoo xidhay.
Paris ayaa kulankii ugu horreyay ee ay ka dheesho tartanka guuldaro 3-2 ah kala kulantay kooxda Liverpool waxaana ay guul kasoo gaadheen kooxda Red Star Belgrade kahor intii aysan bareejo kale la gelin Napoli.
PSG ayaa haatan miiska kala sarreynta ee Group-keeda booska saddexaad ka fadhiya waxaana ay hal dhibic ka dambeeyaan Napoli, Xaalada ayaa faraha ka bixi doonta haddii ay ku hor kufaan kooxda Carlo Ancelloti.